बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको मामिलामा किन चुपचाप छन् तीनवटै खान ? «
Published : 12 July, 2020 4:33 pm
On : अन्तर्राष्ट्रिय, समाज
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधनले बलिउडमाथि कैयौं सवालहरू उठाइदिएको छ। बलिउडमा व्याप्त नोपोटिज्मले उनको ज्या’न लिएको भनेर फ्यानहरूले स्टारहरूमाथि निशाना लगाइरहेका छन् । स्टारहरूलाई बहिष्कार गर्ने त लहर नै चलेको छ। सुशान्तको मृ’त्यओप्रति सबै कलाकारले आ आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै सिबिआई जाँचको माग गरिरहेका छन्।
सबैले सुशान्तको लागि न्यायको माग गरिरहँदा बलिउडका तीन खान किन चुप छन् त? शाहरुख खान, सलमान खान र आमिर खानले किन मौन रहनु नै उचित ठानेँ त? यस विषयमा फ्यानहरूले सवाल उठाइरहेका छन्। आखिर किन यिनीहरूले सुशान्तको बारेमा केही बोलेनन् ?
बलिउडमा यो महत्त्वपूर्ण सवाल बनेको छ। यसै कुरालाई जोड्दै भाजपाका राज्यसभा सांसद तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री सुप्रमनियम स्वामीले एउटा ट्विट गर्दै, रुपा गांगुली तथा सेखर सुमन लगायतकाले सुशान्तको निम्ति सिबिआई जाँचको माग गरेका छन् तर तीन खान किन चुपचाप छन्? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
साथै यी तीन खानको सम्पत्ति जाँचको पनि माग गरेका छन् । यिनीहरूसँग बिदेशमा ठूल्ठूला बंगला र महलहरू कहाँबाट आए? कि कसैले उपहारमा दिएको हो? भनेर व्यङ्ग्य गर्दै यी बलिउड अभिनेताहरूका सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।